Stainless vy tongotra roa F-36-1
Habe: L590 * W410 * H200 / 400mm 1. ny vy vy tsy azo asiana, rakotra amin'ny fantsom-bokotra ABS 2. tongotra miaraka amin'ny satroka vy tsy misy feo
Fampahavoana mirindra F-36-3
Stool F-36-3 endri-javatra lehibe: 1. haavon'ny haavony amin'ny alàlan'ny lohataona avy amin'ny 480-620mm 2. chromed Base, sampana 5 miaraka amin'ny casters; 3. ny seza dia Dia.320mm miaraka amin'ny cushion ambony 4.knock down construction
Fitaovana vy matevina F-35
habe: 2400mm (L) * 1680mm (H) endri-javatra lehibe: 1. ny vy vita amin'ny vy vy, miaraka amin'ny lamba lamba azo sasana 2. efijery efatra efijery
Matory ho an'ny fandriana semi-fowler H-2
Habe: L1930mm × W890mm × H80mm Fisehoan-javatra lehibe: 1. Ny sponjy kalitao avo lenta dia ny 35KGS / M3 sy ny lamba vita amin'ny rano tsy azo ihodivirana, izay azo sasana sy fandrosehana. 2. miaraka amin'ny zipper
Hatevom-bolo tsara tarehy H-13
H-13 Fonony lamba: Vovon-drano sy famonosana tafo Matetika mpanentana: Solon-tsavony avo be
Fiakaran'ny finday mandeha amin'ny herinaratra
DE-1C1 Fampiharana: ○ Ity vokatra ity dia azo ampiharina amin'ny marary efa hatry ny ela, ary ireo marary mijaly noho ny olana amin'ny finday na tsy fahatapahan-kevitra aorian'ny fandidiana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanampian'ny mpikarakara momba ny hopitaly, toeram-piterahana na amin'ny trano fonenana. Ny mpikarakara dia afaka manandratra na mamindra ny marary amin'ny fandidiana tokana, ary ny famolavolana asa dia afaka misoroka ny ratra any aoriana amin'ny marary vokatry ny hery tsy mendrika ataon'ny mpikarakara. Endri-javatra: ○ Ny endrika lehibe dia vita amin'ny fantsom-by vy misy heriny miaraka amin'ny vovony ...